Xasuuqii 14ka Oktoobar | Doodwadaag waa Danwadaag.
Wixi dhacay maalintii Sabtiga ee 14kii Oktoobar ma aheyn musiibo dabiici ah oo nagu habsatay. Wuxuu ahaa xasuuq iyo gumaad qorsheysan oo lala beegsaday shacab Soomaaliyeed oo wax ay galabsadeen aysan jirin. Qolada fulisay weerarkan bahalnimada ah uma aabbo yeelin cidna: dhallaan iyo waayeel, sabool iyo hantiile, rag iyo dumar, musaafur iyo mid negi ah, siyaasi iyo qof caadi ah toona.
Waxaa cadaw u ahaa oo ay doonayaan in ay cirib tiraan waa qofka Soomaaliga ah ee Muslimka ah. Waxaa ay duulaan ku ahaayeen kuna yihiin mar kasta jiritaankeena dadnimo iyo keenna ummadnimaba. Waxaa ay doonayeen in ay nagu abuurraan argagax iyo anfariir si aan u lumino doonisteena iyo hal-adeygeenna dadnimo.
Xilligan waqti baroordiiq iyo oohin maaha. Cadawga gowracan iyo gumaadkan geystay waa joogaa, welina itaal iyo xoog uu ku fuliyo xasuuqyo kale waa uu leeyahay. Nasiib darro shacab iyo dawladba waxaa ay musiibadan u la dhaqmaynaa sidii in ay tahay mid dabiici ah. Mas’uuliyiintii dalka waxaa ay dhooban yihiin gegida diyaaradaha si ay u guddoomaan kaalmada gurmadka dibadda inoogaga imanaysa: “Turki baa yimid”, “Qatar baa soo gurmatay”, “Mareykanba soo caga dhigtay”. Gurmadka aad baa loogu baahnaa, abaal ballaaranna waan u haynaa walaalaha soo gurmaday.
Laakiin yaa ku mashquulsan oo iska wareeysanaya hooggii dhacay waxa fududeeyay, iyo cidda mas’uuliyaddeeda iska leh? Maxaa sababay in hay’adaha amaanka ee dawladda aysan marna dhan abaabul, agaasin, xog iyo sirdoon, is-xilsaar iyo naf-hurisnimo aysan la tartami karin kuwa cadawgan aan baylahda u nahay?
Eedda dawladda oo qura ma lahan, is-yeel yeelka waxaa uu noqday dhaqan bulsho iyo mid siyaasadeed. Shacab ahaan waxaanu nahay dad ay la qumanaatay in noloshoodii ay u difaacaan dad soo gurmaday. Ciidamo shisheeye oo kaalmo ku yimid ayaa “nin lagu seexdow ha seexan inoo ah”. Dad in ay noolaadaan ay dhab ka tahay ma nihin. Marna karti, hufnaan iyo wax qabad xil isuguma dhiibno. Halbeegga “loyalty, not talent, counts in Somali politics”. Haddaba mashaqada yaa kaa saaraya oo cadawga kaa yureeynaya? Yaa qaranimadaadii cagaheedii kuugu istaajin? Yaa doonaya in aan dawlad ahaanno?
GURMAD? Ha ka yaabin!
Qoraa: Ibraahim Axmed Cismaan